Wasakhowga maqaarkaaga - sidee ayay kuu saamaynaysaa? | Bezzia
Wasakhowga maqaarkaaga: sidee u saameeyaa?
Susana godoy | 09/05/2022 10:00 | Quruxda
Waxaan mar walba ku adkeysaneynaa inaan ilaalino daryeelka maqaarka oo wanaagsan. Sababtoo ah waxaa jira arrimo badan oo dhaawici kara iyo haa, wasakhowga maqaarkaaga Waa mid ka mid ah. Inkasta oo ay tahay in aan caddayno in aysan kaliya saameynaynin maqaarka laakiin sidoo kale waxay saameyn kartaa jirka, gaar ahaan sambabada.
Laakiin laga yaabee in taasi ay horeba uga hadlayso waxyaabo waaweyn waxaanan diiradda saari doonaa waxa wasakhaysan uga tagi karo maqaarkaaga, taas oo aan yarayn. Tan iyo qaar ka mid ah Cawaaqibta ka dhalan karta waxaa loo soo bandhigi karaa si degdeg ah ama cad iyo kuwo kale oo mustaqbalka fog ah. Ogow sida waxaasoo dhan u saameeyaan maqaarkaaga jilicsan!
1 Waxay yaraysaa antioxidants maqaarka
2 waxay keentaa qallayl
3 finan badan
4 Muuqashada laalaabyada
5 Cuncun badan ama maqaarka rosacea
Waxay yaraysaa antioxidants maqaarka
Marka aan ka hadalno wasakhaynta maqaarkaaga, sidoo kale waan ka hadalnaa Gaasaska ka yimaada baabuurta, iyo sidoo kale boodhka ama hawada lafteeda. Markaa waxay si toos ah u gaadhaan maqaarkeena taasina waxay sababi kartaa in antioxidants-ku ay yaraato.. Waxaa ka mid ah waxaan muujineynaa fitamiin C ama E. Laba ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee muhiimka ah. Tan iyo markii ugu horreysay ay qaadato daryeelka ugu sarreeya, ka hortagga gabowga dhicis ah, iyada oo aan la iloobin in ay sidoo kale lagama maarmaan tahay in la soo saaro kolajka. Halka kan labaadna uu dabinno xagjirrada xorta ah ee sababa dhaawaca maqaarkayaga. Markaa haddii ay yar tahay, markaas aad bay ugu badan tahay in maqaarkeenna uu xanuunsado. Hadda waxaan fahamsanahay in yar oo dheeraad ah!
waxay keentaa qallayl
Waxaa hubaal ah in mararka qaarkood aad dareentay oo aad si fiican u garan wayday waxa sababay. Waa hagaag, waa inaan ka hadalnaa xaqiiqda ah, sida caadiga ah, wasakhda maqaarkaaga waxaa lagu arki karaa qallaylkeeda. Sidaa darteed, aad bay muhiim u tahay in wejiga si fiican loo nadiifiyo subaxdii iyo habeenkii labadaba. Laga soo bilaabo nadiifinta sheegay, waxaan isticmaali doonaa kareem qoyan wanaagsan. Si aad u awooddo inaad aragto sida barti mar kale ugu jirto wejigayaga. Dabcan marka lagu daro kiriimyada laftooda, ma jiraan wax la mid ah doorashada daaweynta dabiiciga ah ama guriga. Halka maaddooyinka ay ka mid yihiin malabka, avokado ama muus ay ku jiraan, maadaama ay dhammaantood ku darayaan fuuq-bax, taas oo ah waxa aan u baahanahay.
Inkasta oo ay run tahay in qallaylku yahay mid ka mid ah dhibaatooyinka wasakhowga maqaarkaaga, mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay korodho sebum. Sidaa darteed, kororkani wuxuu keeni doonaa wasakh badan oo daloolada ah iyo sida, waxay keeni doontaa muuqaalka finan. Markaa mar labaad waa inaan xusnaa in daryeelka maqaarku uu yahay shay ka mid ah kuwa aasaasiga ah. Sababtan awgeed, waa in aan ku darnaa in todobaadkiiba hal mar, aad u baahan tahay inaad sameyso exfoliation, maadaama habkan, waxaan ku macsalaameyn doonaa unugyada dhintay.
Hubaal waxaad hore u qiyaasi kartaa, sababtoo ah runtii markaan ka hadalno qallaylka ay keento wasakhowga, iyo sidoo kale hoos u dhaca fiitamiinada, waxaan leenahay laalaabkii natiijada. Maqaarku wuxuu noqon doonaa mid aad u adag oo sidaas darteed, xariiqyada muujinta ayaa siin doona laalaabyo calaamadaysan. Si taas loo sameeyo, waa inaan ka hortagnaa iyaga oo marsanayna kareem maalinle ah ama serum oo mas'uul ka ah soo celinta iftiinka wejiga iyo dabcan, jilicsanaanta.
Cuncun badan ama maqaarka rosacea
Xaaladdan oo kale, waa in la sheegaa in rosacea ay yeelan karto sababo kala duwan, laakiin dhammaantood, wasakhdu sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Casaankaas ka soo muuqan kara wejiga oo dhan waxa kale oo ay sabab u tahay qorraxda, dabaysha ama qoyaanka. Si fiican u dhaq wajigaaga laakiin ha isticmaalin saabuun ama biyo aad u qabow ama aad u kulul. Ilaalinta qorraxda waa mid kale oo kiriimyada ah oo ay tahay inaad ku xisaabtanto maalin kasta. Hadda waxaan ognahay sida wasakhdu u saamayso maqaarkaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » Wasakhowga maqaarkaaga: sidee u saameeyaa?
Gastroesophageal reflux, waa maxay cuntooyinka ay tahay inaad iska ilaaliso
Ku dar midabyo firfircoon oo casri ah labiskaaga